I-Shelf Corporation ne-Aged LLC Imininingwane kanye namathiphu
Iyini iSherf Corporation / Aged Corporation?
"Inkampani yamashalofu," eyaziwa nangokuthi "inkampani endala," noma "endala inkampani yamashalofu"Uma ubhekisa ku-LLC, isibonelo, yinkampani esevele yakhekile, kepha ayisebenzi, futhi elungele" ukuthengwa "ngumnikazi omusha. Kunezizathu eziningi zokuthi abantu bathenga izinkampani zamashalofu. Ngakolunye uhlangothi, kunezinto ezithile okufanele uzibheke lapho ucubungula enye yalezi zinkampani “ezilungiselelwe”.
Chofoza ukuze ubone eyethu Uhlu LWEZIKHALAZO ZABADALA
Kungani Kufanele Ngisebenzise noma Ngithole i-Shelf Corporation?
Kungumsebenzi wami ukuqaphela ukuthi iminyaka yobudala akuyona ukuphela kwento. Akuyona into ebalulekile ebudlelwaneni bebhizinisi nokubolekisana, ukubandakanyeka kwezebhizinisi, isikweletu, noma izivumelwano zezakhiwo. Njengenkampani esunguliwe kungonga isikhathi. Lokho wukuthi, akudingeki ukuthi udlule kuyo yonke inqubo nesikhathi sokulinda ukuze usungule inkampani entsha. Izinsizakusebenza zebhizinisi ezingaba khona zinqikaza ukwenza izinkampani ezintsha noma eziqalayo. Ngakho-ke, ngenkampani ekhona, ungasondela kubo njengebhizinisi elisunguliwe elivele likhona. Ngokusobala, iminyaka eminingi le nkampani ibikhona, iba ngcono. Ngakho-ke, kungenzeka kakhulu ukuthi oxhumana nabo bebhizinisi lakho bathathe inkampani yakho ngokungathi sína. Kanjalo, lokhu kunganikeza ibhizinisi lakho ukufinyelela okuningi ebudlelwaneni bebhizinisi.
Ukucaca, ukuthembeka kuyanda, ngombono wethu, lapho usebenzisa inkampani ukwenza ibhizinisi ngempela; hhayi nje ngenani leminyaka othile othile usetha inkampani eshalofini. Lobu budlelwano bungafaka izivumelwano, izinhlelo zokulinganisa zohlobo lwe-Dun & Bradstreet, njll., Nazo zonke zingabhekwa lapho ubheka izinkampani ezineminyaka yobudala ezingaba khona. Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukuthi uthole lezi zinkampani zamashalofu emithonjeni ethembekile. Isibonelo, senza konke okusemandleni ukwenza ubunzima bokususa lezo ezinesikweletu esingaba khona noma esivele sikhona.
Ingabe Inkampani Esemdala Iyakunika Ukuthembela?
Uma usuyikhethile kahle inkampani yakho yeshalofu, inkampani inomlando wokugcwalisa ngokushesha. Ingabe ikunikeza ukuthembeka okusheshayo kwenkampani yakho nesithombe sebhizinisi? Ngeke sithi lokho kuzokwenzeka. Kepha, kuthiwani uma ukhetha inkampani ehambelana nenombolo yeminyaka empeleni owabandakanyeka kuhlobo lwebhizinisi elizokwenziwa yinhlangano?
Ngokwemvelo, asikho isiqinisekiso sokuthi uzokwazi ukukhokhisa ngaso leso sikhathi izinkontileka zombuso. Ngale ndlela, izifunda ngokuvamile zinemithetho emincane yokuphila isikhathi eside yezinkampani ezivumela ukwenza inkontileka yazo. Asikuqinisekisi ukuthi uzokwazi ukuthola imigqa yesikweletu elula. Asethembisi ukuthi uzothola imali mboleko kubaphathi abancane bebhizinisi noma amabhange asesifundeni sakho. Futhi asisho ukuthi ungadonsela abatshalizimali abangaba khona kalula ngenhlangano “emisiwe”. Okusemqoka ukuthi, thembeka. Vumela abanye bazi ukuthi usanda kuyithola inkampani, uma kunjalo.
Njengoba sishilo ngenhla, into eyodwa ibaluleke kakhulu. Ufuna ukusho ukuthi inkampani yamashalofu oyicubungayo ayinazo izikweletu ezifihliwe noma ezihlanganayo. Ngokwengxenye enkulu, ungaziqinisekisa ngalokhu ngokubheka umlando webhizinisi. Isibonelo, ungahle ufune ukuqinisekisa ukuthi ubungako bemisebenzi yayo yebhizinisi ukuthi othile wafaka isicelo se-EIN. Mhlawumbe kuvule i-akhawunti yasebhange.
Kunokungafani okungaqondakali kulo mthetho. Kunezikhathi lapho izinkampani ezisungulwe kahle zivuselelwa, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene. Lokhu kungabaluleka kakhulu ngokwemvelo ngenxa yobunikazi noma isikhathi sabo esikhona. Izinhlaka ezifanelekile zingasigingisisa ngokucophelela ezikweletini nasekuvezweni. Izinkampani ezindala zifunwa kakhulu. Ngaphezu kwalokho, isidingo kanye nentengo kukhuphuka ngokuya ngokuthi sesisungulwe isikhathi esingakanani.
Kalula nje, uma uthenga ibhizinisi elidala ngokuqondile kubanikazi balo, kufanele wenze inkuthalo efanele. Kufanele ukhathazeke uma umuntu noma iqembu elithengisa inkampani endala lenzile kunoma yikuphi ukwenza; ikakhulukazi lezo ezingakhiqiza uhlobo oluthile lwesikweletu sesikhathi esizayo sebhizinisi noma sabasebenza kulo. Lokhu kungenzeka kungabi lula ngaso sonke isikhathi ukuhlola, futhi ngokuqinisekile kudinga uphenyo oluthile lochwepheshe. Indlela yokusebenza engcono kakhulu ukuthola kuphela izinkampani ezindala noma zamashalofu kusuka kubahlinzeki abadumile (noma abathengisi). Umhlinzeki kufanele abe nomlando wokuthengiselana okuphumelele kule nkundla. Ungaqiniseka ukuthi abahlinzeki banikeze umthengi isiqinisekiso. Lesi isiqinisekiso esifanelekile ngokumelene nezikweletu zangaphambili noma izikweletu. Ngaphezu kwalokho kufanele isebenze ngokuzikhandla okufanelekile ngaphambi kokunikeza inkampani yeshalofu ethengiswayo.
Izikhathi eziningi ama-Shelf noma ama-Aged Corporations ahlanganiswa nawo shell Izinhlangano, zombili ngokuya ngencazelo kanye nesizathu sazo sokuba khona. Lokhu kudideka akunakuba yiphutha ngokwengeziwe. Izinhlangano ze-Shell ziyizinhlaka ezihluke ngokuphelele, zombili ku-scalo nasekwakhiweni.
Inhlangano yamagobolondo yinkampani efakiwe engenazo izimpahla ezibalulekile noma isakhiwo esisebenzayo. Kungaba ibhizinisi lase-US noma i-International Business Corporation (IBC). Ungaba neNkampani Yezimali Zotshalomali (i-PIC), inkampani yangaphambili noma “ibhokisi leposi”. Kunezizathu ezizwakalayo zokuba khona kwezinhlangano zamagobolondo. Isibonelo, ezinye izinkampani zamagobolondo ziguqulwa zaba yizinkampani ezithengiswa emphakathini. Ochwepheshe benza le nqubo ngokugcwalisa okuningiliziwe kanye nokuvunyelwa yizinhlangano ezifanele zikahulumeni nezokulawula. Lezi zinkampani zivame ukuhlanganiswa namabhizinisi akhona. Lokhu sikubiza ngokuthi yilokho okubizwa ngokuthi a hlanganisa ukuhlangana kabusha. Le ngenye yezindlela umuntu angahamba ngayo emphakathini ngokushesha nangendlela efanele.
Izinzuzo zeShelf ne-Aged Corporation
Ilondolozwa isikhathi ngokubikezela isikhathi nezindleko zokwenza ibhizinisi elisha
Ukufinyelela osheshayo kokubhidelwa kwenkontileka kungenzeka kungenzeki kuwo wonke amacala. Izinkontileka eziningi zokubhida zidinga ukuthi inkampani yakho ibe khona isikhathi esinqunyelwe sobude besikhathi. Qiniseka ukuthi ubheka isimo ngasinye bese usebenzisa ukudalulwa okugcwele ngokuthi uthole inkampani yakho nini.
Ukutholwa kwenkampani esheshayo.
Isikhathi eside sokufayila.
Kungahle kukhange kubatshalizimali abangaba khona kanye capital capital. Ngokwemvelo kuzidingo zokwenza ukuhlunga okusemthethweni. Iminyaka yenkampani, iyodwa, ibhekwa kuphela njengesici esincane.
Kwangathi noma kungenzeka kungabi nokufinyelela okusheshayo futhi okulula kokuboleka. Futhi kunezinye izici ezinesisindo esengeziwe njengokulinganisa isikweletu sebhizinisi nokwenza inzuzo.
Yize kunjalo, sincoma ukwethembeka nokudalulwa okugcwele ngosuku lokuthola kwakho inkampani endala.
Amandla esikweletu akhona
Izingqinamba zesikweletu ezingase zibe khona
Okwenziwayo kwebhizinisi okwenziwe ngaphambilini okungaholela kwisikweletu esizayo
Kunezinzuzo ezinkulu zokusebenzisa izinkampani zamashalofu ezindala. Into ebalulekile ukuthenga le nkampani ngenkampani edumile enedumela elide. Inhlangano yethu inikezela ngezinkampani ezindala ezidayiswayo. Inkampani eyi-General Corporate Services, Inc. inkampani ephethe uhlobo lweCompanies Incorporate yasungulwa ngo-1906. Ukuphathwa kwethu kwamanje bekukhona kusukela ku-1991. Zizwe ukhululekile ukushayela noma ukugcwalisa ifomu lokubonisana lamahhala kuleli khasi.